MKV metadata Tagger: Ku dar metadata in MKV for Windows / Mac
> Resource > Video > Sida loo dar MKV metadata for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Ma jiraa qof ku gartaan si loo dar metadata (sida waraaqaha, agaasimaha ama magaca dhacdo filimka) si file MKV ah?
Su'aashani waxa inta badan la weydiiyay users badan. Dhab ahaantii waxaad isku dayi kartaa Wondershare Video Converter Ultimate ( Video Converter Ultimate for Mac ) in lagu daro metadata in MKV. Waxaad u baahan tahay oo kaliya 4 tallaabooyin ay ku dhameysan socodka hawsha oo idil. MKV video la metadata waxay noqon doonaan sida kuwa ka iibsaday Lugood. Abaabulka video in Lugood waa wax inta badan ka sahlan. Codsigan shaqeyn karaan oo keliya ma aha sida tagger ah metadata u MKV, laakiin sidoo kale Converter video ah, editor video iyo DVD abuure. Qalab A boosaska badan, miyaanay ahayn?
Sida loo dar metadata in AVI
1 dar MKV File galay codsigan
Kadib markii ay tagger metadata, waayo, MKV, interface ku ogaado waxaa lagu soo bandhigi doonaa idinka soo hor jeedda. In tab loogu badalo ka, kaliya jiidi file MKV aad u galay, ama guji "Add Files" badhanka si ay u dajiyaan MKV u galay. Haddii aad rabto in aad ku darto metadata in DVD ah, fadlan guji "DVD Load" on sare ee interface ka.
2 Dooro Qaabka ugu Output Right
Si aad ku dari metadata in MKV, codsigan u baahan yahay si aad u dhigay qaab wax soo saarka Apple sida qalabka, MOV, ama M4V. Just riix badhanka arrow hoos ku hoos "Qaabka Output" icon, guji "Device", ka dibna dooran iPad, iPhone ama Apple TV. Sidoo kale waxaad riixi kartaa "qaab", guji "Video", ka dibna dooran MOV ama M4V.
3 Edit Video (Ikhtiyaar)
Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad la shakhsiyeeyo MKV video this. Tani tagger metadata MKV sidoo kale kaa caawin karaan inaad u samaysaan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan dooneynin in ay wax ka bedel, kaliya ka hor tag tallaabada 4 si aad u barato sida loo dar metadata in MKV.
Si aad xaalkaa video ah, fadlan riix "Edit" icon on video ah laga keeno, ka dibna riix goo, beeg, Saamaynta, Watermark ama Cinwaan in xaalkaa video sida si aad u dhadhan gaar ah. Haddii aad ku qanacsan tahay shaqadaada, riix "OK" oo u badbaadin doonaa.
4 Ku dar metadata in MKV
Marka hore waxaad u baahan tahay riix icon this si arbushin ilaa suuqa kala metadata ku daray ah, ku qor magacaaga video MKV, ka dibna riix "baadh" si aad u hesho metadata. Ka dib helitaanka macluumaadka metadata faylka MKV aad, riix "OK" oo u badbaadin doonaa.
5 MKV Play on Device Apple
Ka dib markii ay wax walba oo la sameeyo, kaliya riix "Beddelaan" badhanka hoose ee interface ka. Markaas video ah la gediyay la synced doonaa in Lugood. Waxaad arki doontaa in aad MKV video waxaa la dabool calaamadeeyay. Iyo macluumaad metadata, sida jilayaasha, agaasimayaasha, comment, sharaxaad, ayaa la soo bandhigi doonaa.